(src)="1.1"> Costa Rica : Diabe Fanehoan-kevitry Ny Vehivavy tsy Maoty , Foto-pinoana ary Zon 'ny vehivavy
(src)="1.2"> Ny Alahady lasa teo , 14 Aogositra 2011 , no nisy ny Diabe Fanehoan-kevitry Ny Vehivavy tsy Maoty tao San Jose renivohitra nahatonga fanoherana mahery vaika avy amin 'ny filazam-baovao sy ara-pinoana noho ireo hira sy seho an-tsehatra mahery setra lazaina ho manohitra ny fiangonana .
(src)="1.3"> Ilay adihevitra nafana dia samy nandrakotra ny filazam-baovaom-bahoaka sy ny haino aman-jery avokoa satria ny mponina dia naneho hevitra tao amin 'ilay dikanteny Costa Ricain amin 'ity hetsi-panoherana nalaza eran-tany ity .
(src)="2.1"> Na dia niovaova aza ny fanehoan-kevitra momba ilay Diabe Fanehoan-kevitry Ny Vehivavy tsy Maoty , dia toa hoe ny tena fahombiazany dia ny fitarihana ny mponina hisaina ny herisetra mihatra amin 'ny zaza amam-behivavy , ny finoana ary ny fanajàna .
(src)="3.1"> " Tian 'i Jesosy Ny Vehivavy tsy Maoty " nataon 'i Julia Ardón , 2011
(src)="4.1"> Ny herinandro lasa teo , Global Voices dia nampakatra lahatsoratra fanavaozam-baovao momba ny antony ambadik 'io Diabe io :
(src)="4.2"> Ilay Diabe dia ho valin 'ilay fanambarana nataonà Mpitarika fivavahana Katolika iray sy Kardinaly nitsidika nanditry ny Fety masina ny 2 Aogositra , tamin 'ny filazany fa tokony hiakanjo maotina ny vehivavy mba hisorohana ny fanambaniana sy ny fanaovana azy ho toy ny fitaovana , ary tsy hanao ny asan-dehilahy fa hikarakara ny ao an-tokantranony .
(src)="4.3"> Arak 'i Pablex , mpanao gazety sady bilaogera izay nanokana fotoana namakiana ny kabarin 'ilay mpitondra fivavahana Ulloa ny 2 Aogositra , tsy nolazainy mihitsy ilay fehezanteny nataon 'ilay gazety La Nación ho azy izay nahatonga fitroarana ka nampahery ilay Diabe :
(src)="1.1"> Oganda : Niady Ho Fiarovana Ny Ala Mando Ireo Ogande Any Anaty Aterineto
(src)="1.2"> Mabira no teny nomarihan 'ny Ogande betsaka indrindra tao amin ’ ny tranokalan-tambajotra Ogande tamin ’ ny herinandro lasa .
(src)="1.3"> Hita ao afovoan 'i Oganda akaikin 'i Kampala renivohitra ny Alan 'i Mabira .
(src)="1.4"> Iray amin 'ireo ala voajanahary vitsivitsy izay sisa tavela taorian 'ny taona maro nahapotika hektara maromaro
(src)="2.1"> Ny fitomboan 'ny mponina izay tena miankina amin 'ny fambolena no nahatonga ny faharipahan 'ireo rakotr 'ala an 'i Oganda , kanefa ny tolona amin 'izao fotoana dia fanoherana ny governemanta sy orinasa iray mpamokatra siramamy , Sugar Corporation of Uganda Limited ( Scoul ) , izay mikasa haka ny ampahan 'ny ala ho famokarana fary .
(src)="2.2"> Nanana velaran 'ala 5 tapitrisa hektara i Oganda ny 1990 nefa nihena ho 3,5 tapitrisa izany nanomboka ny 2005 .
(src)="2.3"> I Oganda dia iray amin 'ireo firenena Afrikana folo nahitana fahaverezana ala ambony indrindra .
(src)="3.1"> Fampisehoan 'i Fred Senoga Makubuya ny sarin 'ny zava-mitranga amin 'ny alan 'i Mabira .
(src)="7.1"> Adihevitra maro no mandeha amin 'izao fotoana izao .
(src)="7.3"> Nahoana ny Filoha no miziriziry amin 'ny fanomezana an 'i Mabira ho an 'i Mehta ho takalon ’ ny vola an-tapitrisa dôlara sy siramamy ?
(src)="7.5"> Tokony hisy fanadihadiana atao mikasika ny hoe ohatrinona no nentin 'ny Scoul ankoatr 'ireo mpamatsy vola hafa ao amin 'ny Mehta , manana fahatsapana aho fa hahita ny valiny isika toy ny hoe nahoana ny M7 no milefitra amin 'ny fandripahana an 'i Mabira .
(src)="7.6"> Patricia Sembuse dia mankasitraka ny Fanjakana Buganda sy ny fiangonana , izay nanome tany hafa ho an 'ny orinasa mpamokatra siramamy ho hetsika fiarovana an 'i Mabira :
(src)="8.1"> Mary Kelly miady hevitra ny karama zaraina sy izay misahana betsaka ny toerana ambony ao amin 'ilay orinasa :
(src)="8.2"> Ny lehiben 'ny ratsana rehetra sy ireo lehiben 'ny sampana dia indiana , ho famitinana , ao amin 'ny ambaratongam-pitantànana fotsiny dia misy indiana 36 farafahakeliny ao amin 'ny Scoul , ireo toerana ambany sasantsasany ihany koa dia tazonin 'ireo indiana : ohatra ny ao amin 'ny sampana ( fizarana ) fotsiny , ireo mpiasa tompon ’ andraikitra amin ’ ny famatsiana solika ary ireo ( contre-maitre ) any amin ’ ny saha fambolena fary dia indiana .
(src)="8.3"> Noho izany misy mpiasa indiana 100 farafahakeliny ao amin 'ny Scoul .
(src)="8.4"> Amin 'izao tena loza rehefa tonga amin 'ny resaka karama : ireo mpitantana indiana dia mandray 1500 dôlara amerikana avy raha kely indrindra izay arotsaka ao amin 'ny kaontin 'izy ireo any amin 'ny taniny ka tsy misy haba izany , ambonin 'izany samy mahazo 500k ug shs ( shilling ogande ) isan-kerinandro avy izy ireo .
(src)="8.5"> Ho an 'ireo mpitantana mainty hoditra izay ny ankamaroany dia mpanampy dia mandray 500 shs raha betsaka indrindra ..
(src)="8.7"> Mihevitra aho fa tokony handeha mihoatra ny fanoherana ny fanomezana an 'i Mabira isika .
(src)="8.8"> Ireo mpikambana ao amin ’ ny vondrona dia tokony hitarika ny fanentanana ny fambolena ala indray any amin ’ ny ampahany rava .
(src)="8.9"> Mino aho fa mety hanohana an-kitsipo ny famerenana indray an 'i mabira IREO OGANDE .
(src)="8.11"> Andriamatoa Museveni dia voaterin ’ ny krizy ara-toekarena avy amin 'ny lafiny rehetra , ny ny fihenan-danjan ’ ny shilling , ny vidim-piainana izay midangana dia midangana ary ny vokatr 'ireo fitokonana amin 'ny endriny rehetra sy zavatra samy hafa , sady mitady zavatra hafa hamiliana ny sain 'ny vahoaka izy no misintona tsikelikely izay angovo mihoatra ... eh , dia tahaka ny inona tokoa moa izany ny fahombiazan 'ny fanarian-dia Mabira !
(src)="11.1"> Ny Alatsinainy , nentin 'ny governemanta tany an 'ala ny mpanao gazety kanefa tsy afaka nahita izay ampahan 'ala rava izany izy ireo .
(src)="12.3"> @ pjkanywa milaza ny fanolorana an 'i Mabira dia zaran raha misy natao ho amin 'ny siramamy na toekarena :
(src)="12.4"> io zava-mihatra amin 'i # mabira rehetra io dia tsy momba ny siramamy na toekarena , fa toy ny jiolahim-boto izay mihevitra ny tenany ho matanjaka indrindra ao amin ’ ny tokotanin-tsekoly .
(src)="12.5"> Resaka mikasika vahoho sy fahefana tsy refesimandidy izany :
(src)="1.1"> Filipina : Firohotana Mihàza Katsatsaka Tokay
(src)="1.2"> Volana vitsy lasa izay , ny fihazàna ny Katsatsaka Tokay na Tuko amin 'ny fiteny Filipiana dia lasa irohotana tokoa ao Filipina , noho ny tatitra mandeha fa hoe vola be no ividianan 'ireo mpivarotra amin 'ny alalan 'ny aterineto ireo katsatsaka .
(src)="1.3"> Nanomboka ny fihazana rehefa niely ny tsaho fa afaka manampy amin 'ny fitsaboana ny aretin 'ny fahasemporana sy ny VIH / SIDA ny katsatsaka .
(src)="2.1"> Ny Sampan-draharahan 'ny Fahasalamana dia efa namoaka fanambarana izay mampahatsiahy ny vahoaka fa tsy marim-pototra ilay tsaho momba ny lanja ara-pahasalamanan 'ny katsatsaka :
(src)="3.11"> Antony an-davitrisany maro no nahatonga ity varotra katsatsaka ity ho hosoka tahaka izany- hosoka fotsiny tsotra izao .
(src)="3.12"> Indrisy anefa , fa ny ankamaroan 'ireo vahoaka Filipiana dia tena mbola tsy mahalala mihitsy hoe toy ny ahoana ny fomba fiasan 'ny mpanao hosoka .
(src)="3.13"> Nampiseho ny pejy iray manontolon 'ilay tranonkala ihany koa ny mpitoraka bilaogy izay ahitàna ny fandefasana tolo-bidy tena tsy nampino ho an 'ny katsatsaka velona :
(src)="1.1"> Libia : Tànan-Kavanan 'i Gaddafi , Abdessalem Jalloud Niondrana Nankany Italia
(src)="1.2"> Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin 'ny tatitra manokana ataonay momba ny Fikomian 'i Libia 2011 .
(src)="2.1"> Ny vaovao avy any Libia dia miparitaka erak 'izao tontolo izao , noho ny nahazoan 'ireo mpihoko tsikelikely ny tanàna .
(src)="2.2"> Ny vaovao lehibe iray nalaza , dia ny fitsoahan ' ny olo-maventy faharoan 'i Libia teo aloha , Abdessalem Jalloud nankany Italia tamin 'ny fiaramanidin 'ny zotram-pitateran 'i Malta nandalo tany Tonizia , araka ny nambaran 'ny olona ambony iray ao amin 'ny Governemanta Toniziana ankehitriny .
(src)="2.3"> Noraisin 'ny olona maro ho marika tsaran 'ny fahalavoan 'i Gaddafi ny fialàn 'i Jalloud .
(src)="2.4"> Kanefa , mbola maro no tsy nanadino ka nanambara tamin 'ny haino aman-jery ara-tsosialy fa i Jalloud dia mpamono olona foana tao amin 'ny fitondrana Libiana ary tokony hiatrika fitsaràna .
(src)="2.5"> Ny hafa nankasitraka ny fialàny ary nilaza fa efa nanandrana nanohitra an 'i Gaddafi izy taloha .
(src)="2.6"> Ireto ny sasantsasany amin 'ireo resaka maro avy amin 'ny Twitter .
(src)="5.5"> Mandehana any amin 'ny afobe .
(src)="5.18"> Mpampiasa Twitter hafa nitsikera ny tafatafa nataon 'i Jalloud ho an 'ny Al-Jazeera sy ny toetra nasehony :
(src)="1.1"> Ejypta : Mampiasa Twitter Hanampiana Fokontany Mahantra ao Kairo
(src)="1.2"> Rehefa hita ny herin 'ny valantserasera tamin 'ny revolisiona Ejipsiana , dia nanapa-kevitra hiara-hiasa amin 'ny fikambanana manao asa soa ao an-toerana ilay bilaogera Ejipsiana sady mpisiokantserasera Mahmoud Salem ( @ SandMonkey ) , mba hanampy azy ireo amin 'ny fanangonam-bola amin 'ny alalan 'ny fampiasana ny herin 'ny Twitter ka hanangana fotodrafitrasa amina faritra mahantra ao Kairo .
(src)="2.1"> Ezbet Khairalla , no iray amin 'ny faribohitry ny mahantra midadasika indrindra ao Ejipta , ahitana vahoaka manakaiky ny 650.000 .
(src)="2.2"> Faribohitra izay manana velarantany 12 km toradroa eo ho eo ary miorina amin 'ny lembalembam-bato amin 'ny ilany atsimo ao Kairo .
(src)="2.3"> Na dia ao anatin 'ny fivondronan 'i Kairo aza i Ezbet Khairalla dia maro ny foto-drafitrasa tsy hita ao ; tsy ny lakan-drano fanariana rano maloto sy ny fanariam-pako ihany , fa eo ihany koa ny tsy fahatomombanan 'ny fampianarana , ny faharatsian 'ny tobim-pahasalamana ary ny fikarakarana ara-tsosialy .
(src)="2.4"> Araka izany dia heverina ho toy ny taninketsen 'ny fandikan-dalàna sy ny rotaka ara-tsosialy ity faritra be mponina ity .
(src)="3.1"> Mpi-tweet nitsidika sekolin 'ankizy tao Ezbet Khairallah , Kairo .
(src)="3.2"> Sary avy amin 'ny @ pakinamamer ( July 30 , 2011 )
(src)="4.1"> Sarina làlana ao EZbet Khairallah nalain 'i @ pakinamamer tamin 'ny Yfrog
(src)="5.1"> Mba hanampiana amin 'ny fanatsarana ny fari-piainana ao Ezbet Khairalla , Khair Wa Baraka ( Peace and Plenty ) na ( Filaminana sy Fahabetsahana ) , fikambanana niorina tamin 'ny taona 2004 , no nanomboka niasa amina tetikasa momba ny fanabeazana , ny fahasalamana ary ny tontolo iainana , indrindra taorian 'ny fanadihadihana nataon 'izy ireo izay nampiseho fa ny olana lehibe indrindra ao amin 'io faritra io dia ny fitantanana ny fakofako matevina sy mitsiranoka ( rano maloto ) .
(src)="5.2"> Nanolotra fiara mpivezivezy momba ny fitsaboana sy ivom-pampianarana fitaratra ny fikambanana .
(src)="6.1"> Noho ny fanohanan 'ny vahoaka ao amin 'ny Twitter , nahangona vola 2 tapitrisa Livre Ejipsiana ( maherin 'ny 330,000 dolara US ) ny fikambanana " Peace and Plenty " , ao ihany koa ny fanentanana natao tao amin 'ny faritra .
(src)="6.2"> Nantsoin 'i Salem hoe " tweetback " ( @ tweetbackevent ) ny fandraisana antanana nataony , nampiasaina tamin 'izany ny renivola sosialy avy amina mpisionkatserasera manintona izay nahavory mpanaraka manodidina ny 250 000 eo eo .
(src)="6.3"> Samy nahazo vola avy amin 'ny malalatanana ry zareo ka ny takalony dia fanaovana dokambarotra ny orinasa nanome amin 'ny mpanaraka azy .
(src)="6.4"> Nanao izay hampalaza ity fandraisana an-tanana ity koa ry zareo ary manazava amin 'ny olona ny fomba fandraisany anjara .
(src)="7.1"> M-Tweet nandrita ny hetsika Tweetback .
(src)="7.2"> Sary avy amin 'i Rania Helmy , anisan 'ny mpikarakara .
(src)="8.1"> Ny 26 Jolay 2011 , nikarakara hetsika fitadiavam-bola ny " Peace and Plenty " izay notontosaina tao amin 'ny hotely Marriott ao Kairo , izay nanambaran 'izy ireo fa vola 1,349,000 Livre Ejypsiana ( $ 226,600 ) no efa voaangona .
(src)="9.1"> Ireo mpisiokantserasera izay nanatrika ny hetsika ihany koa dia ni-tweet momba ireo malala-tanana sy ny sandan 'ny vola nomeny , na orinasa mpanao zava-pisotro , na mpandraharaha ny fifandraisan-davitra , na koa mety malala-tanana mandà hilaza ny mombamomba azy .
(src)="9.2"> Nametraka nomerao finday manokana ho an 'ny vahoaka ihany koa izy ireo mba ahazoana 3 Livre Ejypsiana ( $ 0.50 ) , ary mbola nampiasaina ihany koa ny Twitter entina nanaparitaka ny vaovao .
(src)="10.1"> Manantena ireo mpikarakara ny Tweetback fa vao santatra ambavarano iny araka ny nosoratan 'i Salem tao amin 'ny bilaoginy , " Mbola ho avy ny manetsaben 'ny fandraisana antanana raha notohananao ny santatra ambavarano , izay noho ny anton-javatra maro sy maha-zavabaovao azy , dia miandry fatratra ny fanohananao . "
(src)="10.2"> Faritan 'ny Peace and Plenty ho santionan 'ny “ faribohitra tsy voarafitra ” mila fampandrosoana i Ezbet Khairalla .
(src)="10.3"> Angamba mety ho avy koa ny fandraisana andraikitra maromaro hafa hanampiana faribohitra tsy voarafitra hafa ihany koa .
(src)="1.1"> Iran : " Fifohazan 'ny Islamika " Sa Fandresen 'ny OTAN Ao Libya .
(trg)="1.1"> Iran : " Islamiskt uppvaknande " eller seger för NATO i Libyen ?
(src)="1.2"> Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin 'ny fanadihadiana nataonay manokana momba ny Fikomiana any Libya 2011 .
(src)="2.1"> Manohy am-pahalinana tokoa ny fanarahana ny fivoaran 'ny toe-draharaha any Libya ny vahoaka Iraniana , ka mirona tanteraka any amin 'ny tontolon 'ny aterineto amin 'ny fanaovana tsikera , lahatsoratra ary bitsika .
(src)="3.1"> Rehefa nantsoin 'ireo olo-manan-kaja sy diplaomaty Iraniana sasantsasany hoe ¨ Fifohazan 'ny Islamika ¨ , ny Revolisionan 'i Libya , dia namoaka sary iray ny bilaogera Iraniana Bedone Onvana izay nahitàna tsy mpankasitraka an 'i Qaddafi iray eo am-panorohana ny sainam-pirenena Amerikana , miaraka amin 'ny teny fanesoana : ¨ Fifohazan 'ny Islamika ! ¨ .
(src)="4.1"> Manoratra i Andishe :
(src)="4.2"> Tsy mbola mazava tsara ihany ho an 'ny mponina Libyanana ho tsara na tsia ny fanohanan 'ny OTAN ny fanonganana ny fitondran 'i Qaddafi .
(src)="4.3"> Kanefa mazava izany , fa raha tsy eo ny fanampian 'ny OTAN dia tsy ho tanteraka mihitsy ny fanonganana ilay Libiana mpanao didy jadona .
(src)="4.4"> Raha ny hevitro manokana , ny mpanao didy jadona izay mamono ireo mpiray tanindrazana aminy sady tsy manisy olana ny fanaovana heloka bevava mahatsiravina , dia tsy mba hihetsika raha tsy miditra an-tsehatra ny be sandry .
(src)="4.5"> Royal Air Force fiaramanidina Typhoon taorian 'ny iraka tany Libya ny 20 Martsa 2011 .
(src)="4.6"> Avy amin 'i O.T.A.N. ao amin 'ny Flickr ( fampiasàna mangarahara nahazoan-dàlana ) .
(src)="5.1"> Nametraka fanontaniana iray tamin 'ireo mpamaky azy i Bamdadi hoe : ¨ Iza no firenena manana isa ambony indrindra amin 'ny fampivoarana ny olona ao Afrika ? "
(src)="5.2"> Rohy iray namaly ny fanontaniana : i Libya izany !
(src)="5.3"> Manampy ilay bilaogera , " izay indrindra , izany dia talohan 'ny nipoahan 'ny ady an-trano tao amin 'ny firenena . "
(src)="5.4"> Tao aminà lahatsoratra hafa iray , dia nilaza i Bamdadi :
(src)="5.5"> Tsy azoko hoe nahoana no tokony hahafaly ny Iraniana ny fahombiazan 'ny OTAN sy ireo firenena Tandrefana ny amin 'ny fitondrana amin-kery antoko politika vaovao any Libya ? ... Angamba heverin-dry zareo fa ny dia mety ho dingana iray hahatongavana any amin 'ny fahafahana ?
(src)="5.6"> Azo antoka fa mivazivazy izy ireo .
(src)="5.7"> Tsy nino an 'izay ireo firenena nandaroka baomba an 'i Libya .
(src)="5.8"> Fahafahana inona ?
(trg)="6.9"> Vilken frihet ?
(src)="5.9"> Tena vendrana mihitsy ianao raha mino izany ... ny fahafahana dia tokony homen-danja kely kokoa farafaharatsiny nohon 'ny fidirana an-tsehatry ny tafik 'ireo firenena matanjaka sy ny famotehana ireo firenena osa amin 'ny alalan 'ny fampiasàna fitaka .
(src)="5.10"> Manoratra i Secular :
(src)="5.11"> Ny fahasamihafàna eo amin 'ny Iraniana sy Libyana dia ny fanohanan 'ity farany ireo mpanao politika fanta-daza nandositra ny fitondran 'i Qaddafi , raha tsy nanohana ny Mir Hussein Mousavi ny Iraniana sasantsasany na dia tsy teo amin 'ny fitondrana mahefa andritran 'ny 20 taona teo ho eo aza izy .
(src)="5.12"> Matetika ny Iraniana no miteny fa dia mitovy avokoa .
(src)="5.13"> Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin 'ny fanadihadiana nataonay manokana momba ny Fikomiana any Libya 2011 .
(src)="1.1"> Vehivavy Afrikana Miezaka ho Mpitondra Fanjakana
(src)="1.2"> Nisantatra ny lalana i Ellen Johnson-Sirleaf tamin 'ny taona 2006 , raha voafidy ho Filohan 'i Liberia ary nanjary vehivavy Afrikanina voalohany tafakatra amin 'ny toerana ambony indrindra .
(src)="1.3"> Nanomboka hatreo , dia maro ireo vehivavy Afrikanina nanapa-kevitra hirotsaka hofidiana filoham-pirenena , vao haingana indrindra tao Benin , Kamerona , Ganà , Ginea , Repoblika Demokratika Kongo ary Nizera .
(src)="1.4"> Samy nanana ny fahombiazany avokoa ny fizotry ny fampielezan-kevitra notanterahin 'izy ireo hatreto ary vitsy ireo manantena fa hahavita hanaradia an 'i Johnson-Sirleaf izy ireo amin 'izao fotoana izao .
(src)="1.5"> Mbola maro ireo fifidianana hotontosaina ao Afrika mandritra ny taona 2011-2012 ary tsy azo isalasalana fa dingana iray mankamin 'ny làlan-tsara ho an 'ny kaontinanta ny fitomboan 'ny kandidà vehivavy izay mbola mitolona ankehitriny ny amin 'ny fisoloan-tena ara-drariny mba hisian ' ny vitsy an 'isa ao anatin 'ny rafitra politika .
(src)="2.1"> Clarisse Juompan-Yakam namoaka lahatsoratra momba ny lohahevitra , izay nanamarika fa maro ireo hevitra itovizan 'ireo kandidà : matetika dia nahavita fianarana ambony izy ireo , mpanao politika mijoro amin 'ny heviny ka sahy nirotsaka an-tsehatra amin 'ny adihevitra ampahibemaso tahaka ny mpiaro ny zon 'olo-tsotra .
(src)="4.1"> Nanoratra i Juompan-Yakam fa i Mariama Bayard Gamatié , izay resy tamin 'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tao Nizera , dia tsy faly noho ny tsy fahampian 'ny fandefasan 'ny fampahalalam-baovao ny fampielezan-kevitra nataony :
(src)="4.2"> Tsy ekena ny fitrandrahana tsy manara-dalàna rehetra eto Madagasikara .
(src)="4.3"> Mikasika ny fitrandrahana ny andramena , dia efa nanomboka ny taona 2001 no nisian ’ izany voalohany .
(src)="1.1"> Meksika : Hero Reports , Fampidirana An-tsarintany Ireo Hetsika Mahafinaritra
(src)="1.2"> Dikasarin 'ny sarintanin 'ny Juarez avy amin 'ny Heroreports .
(src)="2.1"> Ny Heroreports dia tetikasa tsy itadiavan-tombotsoa manokana naompana tamin 'ny fanangonana vaovao avy eny ifotony sy fananganana sarintany itaterana ny risika sy ny fitondrantena mendriky ny olom-pirenena eny anivon 'ny fiainam-piarahamonina eny .
(src)="2.2"> Nanomboka tao Ciudad Juárez , Meksika izy ity , toy ny hoe fandraisana andraikitra nataon 'ny Foibe MIT ho an 'ny Media-n 'olon-tsotra antsoina hoe " Crónicas de Héroes " , eo ambany fitarihan 'i Yesica Guerra , mpikaroka iray momba ny fanomezana endrika amam-bika ny tanàn-dehibe tafiditra anatin 'ny fanomanana diplaoma ambony Master amin 'ny Foto-drafitrasa sy Fanitarana ny Tanàn-dehibe avy amin 'ny MIT .
(src)="2.3"> Ciudad Juarez fantatra amin 'ny maha-iray azy amin 'ireo tanàn-dehibe isan 'ny be herisetra indrindra eto an-tany , noho ny fisian 'ny herisetra ataon 'ny ' cartel ' -n 'ny zava-mahadomelina sy ny vono olona miharo fanolanana .
(src)="3.1"> Manoritsoritra ny tetikasa i Yesica Guerra ao anatin 'ity lahatsary iray ity , tafatafa niarahana tamin 'ny bilaogin 'ny Knight Foundation :